भेनेजुयला प्रकरणले नेकपामा विवाद, ओली नै बेखबर ? | Tungoon
काठमाडौं । भेनेजुयलामा भइरहेको राजनीतिक संकटको विषयमा लिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा विवाद भएको छ । अमेरिकाले भेनेजुयलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिज्ञप्ती निकालेपछि विवाद भएको हो ।
पार्टीभित्र छलफल नै नगरी अमेरिकाको विरोध गरेर बिज्ञप्ती निकालिएकोमा पार्टीभित्रै धेरैले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । यसले अमेरिका चिढिने र टाढाको कुटनीतिक सम्बन्ध भएको भेनेजुयलाको बारेमा अमेरिकाको विरोध गर्नुलाई कुटनीतिक क्षेत्रले पनि अनौठो मानेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएको एक महिनामै यसरी नेकपाले अमेरिकाविरुद्ध बक्तव्य दिएको छ ।
यसबारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि विस्तृत थाहा नभएको बताएपछि यसले नेकपाभित्र विवाद रहेको प्रष्ट संकेत गर्छ । स्वीजरल्याण्ड भ्रमणबाट फर्किएपछि उनले विमानस्थलमा यसबारे भने– मैले सुनेको छु अलिकति । तर, म भर्खर आइपुगेको छु । नेपाल कस्तो देश हो भने एकपल्ट कोही भट्टराई लडेर घाइते हुनुभएछ । भट्टराई लडेर घाइते !
त्यसबेला कृष्णप्रसादजी प्रधानमन्त्री हुनुहन्थ्यो । भट्टराई भन्नेवित्तिकै उहाँलाई बुझिने अवस्था । भट्टराई लडेर घाइते भनेपछि धुमधाम भयो । हामी पनि चिन्तित भयौं । के भएछ भनेर बुझ्नु त र्पयो । हतार(हतार बुझ्दाखेरि त भट्टराईजीलाई त केही पनि थाहा छैन । भट्टराई त भट्टराई नै, तर अर्कै भट्टराई हुनुहुँदोरहेछ । तर, संकेत केही त्यस्तो हुन्छ ।
त्यसकारण, मिडियामा अस्ति मेरो फोटोसमेतै अलिअगाडि जीप दुर्घटनामा संखुवासभामा निधन भन्ने तपाईहरुले पढ्नुभो होला । यस्ता देशमा राम्ररी नबुझिकन, नपढिकन प्रतिक्रिया दिनु वाञ्छनीय होलाजस्तो मलाई लाग्दैन ।’
ओलीको भनाईले यस विषयमा उनीसँग सल्लाह नगरिएको प्रष्ट हुन्छ ।
Previousबाँदर समात्न पाँच लाख बजेट विनियोजन
Nextमहिलाहरूले पनि खान थाले सेक्सपावर बढाउने ‘फिमेल भायग्रा’ !
इजरायलमा तामाङ ह्वाइखा (कविता) प्रतियोगिता हुने